Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Taiwan » Ihe nkwado ndị Taiwan maka mbata nke Super Typhoon Chanthu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Safety • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ mmiri juru n'ọdụ ụgbọ mmiri Nanfang'ao - foto nke CNA nyere ya
Ajọ ifufe - Chanthu - na -eme mkpọtụ maka Taiwan ma a na -atụ anya na ọ ga -ebute Taipei ozugbo echi, Satọde, Septemba 11, 2021.
Super Typhoon nwere oke ikuku ugbu a nke 180 mph na -eme ka ọ bụrụ oke mmiri ozuzo 5.
Ụzọ Chanthu na -eduga ya ozugbo na Taiwan na obodo Taipei.
Ajọ ifufe na -adịkarị na mba ahụ, a na -atụ anya na oke mmiri ozuzo a ga -eweta oke ifufe na mmiri ozuzo, na -akpata oke idei mmiri na mbata.
Chanthu dị ike nke ukwuu na oke ikuku na -aga n'ihu nke 180 mph, na -eme ka ọ bụrụ oke mmiri ozuzo 5. Ndị ọkà mmụta ihe ọkụkụ na -akpachapụ anya na -ekiri Super Typhoon Chanthu ọkachasị n'ihi na ọ bụghị naanị na ike ya agwụbeghị ụbọchị ole na ole gara aga, ọ na -akawanye njọ.
Amụma na -ebu amụma na Chanthu ga -ada mbà ruo oke mmiri ozuzo 4 tupu ọ daa na ndịda Taiwan. Oke ifufe 4. Ka ọ na -erule oge oke mmiri ozuzo gafere n'akụkụ obodo Taipei, a na -atụ anya na ọ ga -agbada na oke mmiri ozuzo 2.
Super Typhoon Chanthu ga -eweta oke ifufe na oke mmiri ozuzo na ụdị niile, site na 5 ruo 2. Ajọ ifufe bụ akụkụ nke iwu na Taiwan, agbanyeghị, Chanthu na -aga n'ụzọ pụrụ iche nke na -eweghara ya na mpaghara nwere ike ịbawanye ohere nke ọtụtụ. mmebi. Oké mmiri ozuzo ahụ nwere ike bute idei mmiri na ikekwe ọdịda.
N'ime naanị ụbọchị abụọ, ifufe na -adịgide adịgide mụbara site na 2 mph. Naanị oke mmiri ozuzo ise ọzọ dekọrọ ụdị ngwa ngwa a, na -aga site na nkụda mmụọ gaa n'oké ifufe 130 n'ime obere oge, Sam Lillo, onye na -ahụ maka ihu igwe maka Ọchịchị National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Dabere na US National Hurricane Center, a na -akọwa ike ngwa ngwa mmụba nke oke ikuku na -adịgide karịa ma ọ dịkarịa ala kilomita 35 kwa elekere n'ime awa 24. Ụfọdụ ihe ndị dị mkpa maka ime ka ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ na -adị ngwa ngwa gụnyere oke mmiri dị n'oké osimiri, oke okpomọkụ nke oke osimiri (oke nke oke mmiri dị n'okpuru elu), na ịkwa ikuku ikuku kwụ ọtọ.
Mmiri na-ekpo ọkụ na-ejikọ ikuku ikuku na-ekpo ọkụ, ma ha abụọ na-enye ike na mmiri dị mkpa maka ajọ ifufe. Ịkpacha ajị ikuku kwụ ọtọ bụ ihe dị iche na ọsọ na ntụzịaka nke ikuku dị ala na nke dị elu. Nnukwu ịkwa osisi na -agbachapụ oke ifufe na -emepe emepe ma na -eme ka ike gwụ ha, ebe obere ịkwa osisi na -enye ohere ka ebili mmiri too.
Central Weather Bureau (CWB) na -ebu amụma na ka ajọ ifufe na -emechi na Taiwan, akụkụ ya ga -amalite imetụta obodo mgbede Fraịde, na -eweta mmiri ozuzo n'ebe ọwụwa anyanwụ Taiwan. Mmiri ozuzo na ifufe ga -akawanye njọ na Satọde, mgbe oke mmiri ozuzo nwere ike dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Taiwan, Keelung City na Hengchun Peninsula. Ndị Ndị Taiwanese na -akwado nke ọma dịka ha nwere ike, ebe emechiri ụlọ ọrụ na ụlọ akwụkwọ na -atụ anya ọbịbịa oke mmiri ozuzo ahụ.